ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပ | NLD
Home Committee News Central Youth Committee News ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပ
Posted By: mygate wayon: May 28, 2019 In: Central Youth Committee News, Committee News
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ တွေ့ဆုံပွဲ ( မအူပင် ခရိုင် ) ကို ၂၈ . ၅ . ၂၀၁၉ ရက်နေ့၌ မအူပင်မြို့နယ်ရုံး တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ တိုင်းလူငယ်လုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်များ မအူပင်ခရိုင်လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ ညောင်တုန်း/ ပန်းတနော်/ မအူပင်/ ဓနုဖြူ မြို့နယ် လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ လူငယ်ပါတီဝင်များနှင့် မအူပင်မြို့နယ် ညောင်တုန်းမြို့နယ် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ ဥက္ကဌ များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ယခု တွေ့ဆုံပွဲတွင် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေးခြင်း /အခက်အခဲများ / ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် လူငယ်အခန်းကဏ္ဍ / ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေး / လူမှု အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ရေး / သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးစသည့် ကိစ္စရပ်များကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း / အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေး တင်ပြခြင်း စသည့် တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးသူအားလုံး တက်ရောက်ကာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင် ဆွေးနွေးပေးကြသော ပါတီဝင် လူငယ်ရဲဘော် ရဲဘက်များ အားလုံးကို တိုင်းလူငယ်လုပ်ငန်း အဖွဲ့အနေဖြင့် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကာ ဆက်လက်၍ စည်းလုံး ညီညွှတ်စွာ ကြိုးစားကြပါစို့ ဟု ဆန္ဒပြုပါသည်။
Credit – Ko Myo Thet Oo
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးရှိ လူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့မြား တှဆေုံ့ပှဲ ကငျြးပ
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးရှိ လူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့မြား တှဆေုံ့ပှဲ ( မအူပငျ ခရိုငျ ) ကို ၂၈ . ၅ . ၂၀၁၉ ရကျနေ့၌ မအူပငျမွို့နယျရုံး တှငျ ကငျြးပခဲ့ရာ တိုငျးလူငယျလုပျငနျး အဖှဲ့ဝငျမြား မအူပငျခရိုငျလူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့ဝငျမြား ညောငျတုနျး/ ပနျးတနျော/ မအူပငျ/ ဓနုဖွူ မွို့နယျ လူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့ဝငျမြား လူငယျပါတီဝငျမြားနှငျ့ မအူပငျမွို့နယျ ညောငျတုနျးမွို့နယျ အလုပျအမှုဆောငျ အဖှဲ့ ဥက်ကဌ မြားနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျခဲ့ကွပါသညျ။
ယခု တှဆေုံ့ပှဲတှငျ ရှလေု့ပျငနျးစဉျမြား ဆှေးနှေးခွငျး /အခကျအခဲမြား / ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ နှငျ့ လူငယျအခနျးကဏ်ဍ / ရနျပုံငှရှောဖှရေေး / လူမှု အကြိုးပွုလုပျငနျးမြား လှုပျရှား ဆောငျရှကျရေး / သငျတနျးမြား ဖှငျ့လှဈနိုငျရေးစသညျ့ ကိစ်စရပျမြားကို အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခွငျး / အုပျစုလိုကျ ဆှေးနှေး တငျပွခွငျး စသညျ့ တို့ကို ဆောငျရှကျခဲ့ကွပါသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲဖွဈမွောကျရေး အတှကျ ပါဝငျ ဆောငျရှကျပေးသူအားလုံး တကျရောကျကာ တကျတကျကွှကွှ ပါဝငျ ဆှေးနှေးပေးကွသော ပါတီဝငျ လူငယျရဲဘျော ရဲဘကျမြား အားလုံးကို တိုငျးလူငယျလုပျငနျး အဖှဲ့အနဖွေငျ့ ကြေးဇူးအထူးတငျရှိကာ ဆကျလကျ၍ စညျးလုံး ညီညှတျစှာ ကွိုးစားကွပါစို့ ဟု ဆန်ဒပွုပါသညျ။